Sawirro: Maxaa kasoo baxay kulankii taariikhiga ee Kim iyo Trump? – Warfaafiye:
Sawirro: Maxaa kasoo baxay kulankii taariikhiga ee Kim iyo Trump?
Ali Mohyadin Jun 12, 2018 0
Mareykanka ayaa ka codsaday Kuuriyada Waqooyi in si dhamaystiran ay u xaqiijiso burburinta Nukliyerka. Madaxweyne Trump wuxuu yiri “Waxaan filaya in labada dhinac ay ku farxi doonaan natiijada kulanka”
Kulanka Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa noqday kii ugu horreeyay ay abid qaataan madaxweyne Mareykan ah iyo hoggaamiye Kuuriyada Waqooyi ah. Waxay isku salaameen hoteel loo dalxiis taga oo ku yaalla Jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore ka hor inta ay u billaabanin wadahadallada.
Hoggaaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu dhankiisa sheegay inay go’ansadeen in laiska illaawo wixii horay u dhacay, heshiiskaana ”uu adduunka u horseedi doono isbadello waaweyn.” Dadka falaanqeeya siyaasadda gobolka ayaa ku kala aragti duwan qodobada ugu dambayn kasoo baxay kulanka, qaarkood waxay u arkaan kulan aan wax wayn soo kordhinayn, halka qaar kalena ay rumasan yihiin in kulanka uu noqon karo dhabbihii nabadda loo qaadi lahaa.
Mareykanku wuxuu sheegay inuu dammaanad qaadi doono ammaanka Kuuriyada Waqooyi inkastoo aanan la sheegin waxaa ay ka dhigantahay arrintaasi. Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan wadahadallo kale oo looga hadlaya amniga gobolka.
Sawirro: Maxaa kasoo baxay kulankii taariikhiga ee Kim iyo…